Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuchemerera ndekwevakadzi chete here?
Pakuvatana zvinozikamwa kuti mukadzi ane murume anohwisisa muviri wemukadzi wake anonakigwa kashanu kupfuura kunakigwa kwemurume. Izvi zvinobva pakutarisa maNERVES ari pabhinzi yemukadzi tichimaenzanisa neari pamusoro wechombo chomurume. Zvinoonekwa kuti bhinzi iri mberi chose.
Kutizve mudzi webhinzi unopatsana woti hafu uku hafu uku kumativi echitubu zvokuti chombo chiri mukati make chichikwiza mativi awa, maNERVES aya anodavira kuno kubhinzi. Kana mukadzi akazowanazve mukana wekuti uku ane chombo mukati, uku ari kukwizirigwa bhinzi, zvinonaka chose chose.
Zvinofungigwa kuti kunaka uku kunowanda zvokudzungaidza fungwa kusvika mukadzi atanga kuchemerera, kureva kuti kuchemerera iratidzo yokunakigwa nekuvatana nomurume. Kotizve kana murume akahwisisa bhinzi akada kushamwaridzana nayo, Mukadzi wake anongogara ari munhu anochemerera iri nyaya yokudzungaidzwa fungwa nemanakire azvinoita.
Kana murume achikoira mukadzi, Zvikuru kana murume apinza chombo zvisina kudzika, sokuti hafu yechombo murume oshanda nehafu chete achishanda asi achipota achinyudza chombo chese zvinova zvinoitisa PANIC yekunakigwa nechombo. wega unongoerekana wotochemerera pasina zvokuti wazvifunga. Kotizve kuisana nemutovo unonaka, sokukwira murume makatarisana kana kufongora murume opinda achibva shure. Zvese zvinokonzera kugofiwa panhu panonaka. Kunyarara hazvigoni.
Saka apa tiri kubvunza kuti imi varume, pane paunombonakigwawo here kusvika pakuchemerera mukadzi wako, zvisiri zvokutofunga kuti "Rega ndimbochemerera." asi kungoerekana zvatoitika kubva pakunakigwa kuti pamusorosoro?
Tiudzeiwo kuti munohwa sei.
Posted by Mai E Chibwe at 05:10